दुई मिनेटमै बच्चा गायब ? घर भित्रकै मान्छेले बाबुलाई ट्यांकिमा हालेको खुल्यो रहस्य (भिडियो) – दैनिक नेपाल न्युज
अहिले हाम्रो समाजमा दिनानुदिन अनेकौ घ*टना घटिरहेको छ । हरेक दिन अनेकौ घ*टना सुनिरहनुपर्ने हाम्रो बाध्यताले हाम्रो सोच अनी समाज कता तिर लम्किदैछ ? प्रश्नबच्चाक चिन्ह तेर्सिएको छ । यस्तैमा सुन्दै अपत्यारिलो लाग्ने घ*टना काभ्रेमा घटेको छ । सानो दुधे बालकलाई कस्ले पानीको ट्यांकिमा हाल्यो ? सबै चकित छन् ।
आमा बुवा पानी लिन गएको मौका छोपी दुधे बालकलाई पानीको ट्यांकिमा हाली ह*त्या गरिएको छ । सो ह*त्या कस्ले कसरी गर्‍यो भन्ने अझै पत्ता लागेको छैन । तर घ*टना हुँदा सो घरमा हुने सबै शंकाको घेरामा परेका छन् । हेरौ सो समयमा घरमा हुने सबैले के भन्छन् ? कसरी गयो दुधे बालकको ज्यान ? स्थलगत रिपोर्ट जस्ताको तेस्तै…